Neymar Jr oo ka hadlay wararka lala xiriirinayo inuu ku biiri doono kooxda Real Madrid – Gool FM
(PSG) 21 Jan 2019. Laacibka reer Brazil iyo kooxda Paris St Germain ee Neymar Jr ayaa ka hadlay wararka sheegaya inuu u dhaqaaqi doono Real Madrid inta lagu jiro xagaaga soo socda.
Neymar ayaa doonaya inuu ka tago horyaalka Faransiiska kadib imatinkiisa kooxda PSG, waxaana jira warar sheegaya inay suurtogal tahay inuu dib ugu laabto horyaalka La Liga ee dalka Spain, gaar ahaan waxaa la filayaa inuu xiran doono maaliyada cadaanka ah ee kooxda Real Madrid.
Laakiin Neymar Jr oo ka hadlayay wararkan xanta ah ee lala xiriirinayo kooxda Real Madrid ayaa wuxuu yiri:
“U dhaqaaqida Real Madrid? Ma jiraan wax la taaban karo, marka uu jiro wax qaas ah, waxaan u sheegi doonaa qof walba”.
Real Madrid ayaa ku dhibtooneysa in safka kooxdeeda ay ku xoojiso ciyaartooy waaweyn, gaar ahaan ka dib markii uu ka tagay xidiga reer Portugal Cristiano Ronaldo xagaagii lasoo dhaafay, islamarkaana uu isbedel ku yimid qaab ciyaareedka kooxda, taasoo haatan kaalinta seddexaad kaga jirta horyaalka Spain ee La Liga.
Si kastaba Neymar Jr oo haatan 26 sano jir ah, ayaa heshiiska uu ku joogo kooxda PSG wuxuu dhacayaa xagaaga 2022, waxaana xiligan xidiga reer Brazil suuqa kala iibsiga ciyaartoyda looga qiimeeyaa aduun dhan 180 milyan oo euros.